Into the Ashes (2019) | MM Movie Store
နဈဘရငျနာ ဟာ အရငျကတုနျးက မကောငျးမှုပေါငျးစုံ . မှုခငျးဖွဈရပျမြိုးစုံကို ကြူးလှနျတဲ့အဖှဲ့အစညျးမှာ ကငျြလညျခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး အဲ့ပတျဝနျးကငျြကနရှေောငျထှကျလာခဲ့သူပါ။ လကျရှိမှာ ရိုးရိုးသားအလုပျအကိုငျတဈခုကိုလုပျနပွေီး ခဈြရတဲ့ဇနီးသညျနဲ့အေးခမျြးနရေ့ကျတှကေိုဖွတျသနျးနပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ပွဿနာဆိုတဲ့အမြိုးက မီးခှကျထှနျးရှာပွီး လာတတျတာမြိုးဆိုတော့ အရငျတုနျးက သူ့ကွောငျ့အထိနာခဲ့တဲ့ ရာဇဝတျကောငျတှကေ သူ့ကိုပွနျလညျခွရောခံပွီး လကျစားခွတေဲ့ဖွဈစဥ◌ျကို ခပျကွမျးကွမျး ခနျလနျးလနျးတှမွေ့ငျရမယျ့ ကားမြိုးပါ။ ဒီလကျစားခွမှေုကလညျး နဈကို အရငျလိုဘဝကွမျးကွမျးထဲကို ပွနျလညျဆှဲချေါသှားတော့တာပါပဲ။
နစ်ဘရင်နာ ဟာ အရင်ကတုန်းက မကောင်းမှုပေါင်းစုံ . မှုခင်းဖြစ်ရပ်မျိုးစုံကို ကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေရှောင်ထွက်လာခဲ့သူပါ။ လက်ရှိမှာ ရိုးရိုးသားအလုပ်အကိုင်တစ်ခုကိုလုပ်နေပြီး ချစ်ရတဲ့ဇနီးသည်နဲ့အေးချမ်းနေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြဿနာဆိုတဲ့အမျိုးက မီးခွက်ထွန်းရှာပြီး လာတတ်တာမျိုးဆိုတော့ အရင်တုန်းက သူ့ကြောင့်အထိနာခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်တွေက သူ့ကိုပြန်လည်ခြေရာခံပြီး လက်စားခြေတဲ့ဖြစ်စဥ◌်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခန်လန်းလန်းတွေ့မြင်ရမယ့် ကားမျိုးပါ။ ဒီလက်စားခြေမှုကလည်း နစ်ကို အရင်လိုဘဝကြမ်းကြမ်းထဲကို ပြန်လည်ဆွဲခေါ်သွားတော့တာပါပဲ။